Monseigneur Patrick Chauvet 30%-ny mpiangona no mbola tsy miverina an-deglizy
Raha ny tombana nataon'ny “Monseigneur” katolika Frantsay, Patrick Chauvet, dia 30%-n'ny mpivavaka no tsy miverina miangona
Prefektioran' Antananarivo Akatona ireo fiangonana tsy mandefa taratasy fangatahana
Hatramin' ny niandohan' ny herinandro hatraty dia manodidina ny 150 hatramin'ny 170 ireo fiangonana nahatonga taratasy fahafahana misokatra eny anivon'ny prefektiora,
Finoana Hisokatra ihany koa ny Fiangonana FLM
Namoaka toromaika ho an’ny Pastora sy ny Fiangonana ary ny Kristianina FLM rehetra ao anatin’ny Synodam-paritany Antananarivo (SPAnta) ny eo anivon’ny Fiangonana FLM.
Handray ny Papa Ray Masina isika, izay ho tonga andro vitsivitsy ka voninahitra lehibe ho an`ny Malagasy iray manontolo, hoy ny minisitry ny fiarovam-pirenena, Jeneraly Richard Rakotonirina. Nomarihany fa miverina tanteraka eo amin`ny sehatry ny iraisam-pirenena isika eto Madagasikara. Zava-dehibe eto amin’ny firenena ny fitsidihan`ny Papa Ray Masina ka niompana amin`ny fepetra horaisina momba izany ny fivoriana. Notapahina koa ireo pitsopitsony hanatontosana ny fahatongavan’ny Papa Ray Masina mba ao anaty saina milamina. Tsiahivina fa maherin`ny enina hetsy ireo mpino ho avy ka ny dimy hetsy avy eto amin`ny diosezin`Antananarivo. Miandrandra ny fahaiza-manao sy mampiseho ny reherahantsika malagasy amin`ny fahaizana fandraisana olona ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Handray vahiny goavana i Madagasikara ka miomana ny mpitandro filamanana amin`ny fivahinianan`ny Papa Ray Masina ao anatin`ny fandriampahalemana, ao anaty filaminana tanteraka, fifankatiavana eo amin`ny samy Malagasy. Ny minisitry ny filaminana anatiny jeneraly Roger Rafanomezantsoa dia nitondra fanamarinana amin`ireo fiaraha-miasa eo amin`ireo samy mpitandro filaminana. Nahitana olana sy zavatra tsy nety tamin`ny 26 jona na koa tamin`ny fandraisana ny BAREA ka mila sorohina izany fa tsy misy tokony hifanilika andraikitra. Noho izany, ilaina ny firaisankina, hoy izy. Mila hamafisina ihany koa ny fanangonana loharanom-baovao, hoy ihany izy. Ny sekreteram-panjakana jeneraly Richard Ravalomanana miadidy ny zandarimariam-pirenena dia nitondra ireo fanamarinana ara-teknika izay tokony hojerena akaiky toy ny resaka fitaovana fanaraha-maso (OTME). Hanetsika mpitandro filaminana 7 500 ny fitondrana. Vonona ny mpitandro filaminana ary efa tao anaty andro maromaro no nanao fanazaran-tena. Miantso ny vahoaka kosa ireo mpitandro filaminana mba hanaraka ny toromarika rehetra omen`ireo mpitandro filaminana na koa omen`ireo tompon’andraikitra katolika mba tsy hisian`ny zavatra manahirana raha misy tranga tsy dia matotra loatra. Ny fanarahana toromarika dia fomba handrindrana ny fivahinianan`ny Papa Ray Masina eto amintsika izao, ny 6 hatramin`ny 10 septambra.